Laacibka ugu Xooga Wayn kubbada cagta oo Fariin u soo diray Ramos kaddib Dhaawicii uu u geystay Maxamed Saalax – Gool FM
Laacibka ugu Xooga Wayn kubbada cagta oo Fariin u soo diray Ramos kaddib Dhaawicii uu u geystay Maxamed Saalax
Byare June 7, 2018
(England) 07 Juunyo 2018. Sergio Ramos ayaa dhaawac garabka ah garoonka uga saaray Maxamed Saalax Finalkii Champions League.
Sidoo kale wuxuu jug madaxa ka gaarsiyay goolhaye Karius. Baaris ay sameeyeen dhakhaatiirta ayaana iminka lagu sheegay in jugtii uu Ramos gaarsiyay goolhayaha ay sabab u ahayd goolashii sahalka uga dhashay ciyaartii Final ka.
Laacibka ugu xooga badan kubbada cagta adduunka ee u ciyaara naadiga Wycombe Wanderers ee ka ciyaarta heerka saddexaad ee Ingiriiska isla markaana taageeraha wayn u ah Liverpool ee Adebayo Akinfenwa ayaa Muuqaal Digniin ah u soo diray Kabtanka Real Madrid.
“Ha wal walin Liverpool FC markasta waan idin taageeri doonaa. Waan ku wada jirnaa midaan# mararka qaar waa inaad dhoola caddeysaa#Habka Xawayaanka,” Akinfenwa ayaa sidaa ku soo qoray twitter ka.
Muuqaalka uu soo duubay ayuu dabadeed ku yiri: “Usbuuc ayaa laga joogaa tan iyo Final kii Champions League, fasax ayaana iminka ka soo laabtay.
“Sergio Ramos, ma aadan sameyn oo kaliya inaad garoonka ka saartay xariifkeyga Maxamed Saalax, laakiin waxaan sidoo kale iminka maqlayaa in Karius aad ku riday shook Madaxa ah.
“Fiiri Walaalkey, marna kulama ciyaari doono oo kaama hor imaan doono waayo marna kama ciyaari doono Champions League, Nasiib ayaad leedahay, Laakiin haddii ay dhacdo inaan ka soo qeyb galo…….. ‘Wuxuu kala jabiyay Kabtii uu hayay isagoo ula jeedo sidan oo kale ayan ku yeelayaa”.
Taageerayaasha Liverpool ayaa aad ugu riyaaqay digniinta uu Xoogwanaha u diray Ramos iyagoona durba bilaabay inay Baraha bulshada soo dhigaan fariimo ay kooxda uga codsanayaan inay la soo saxiixdaan Akinfenwa.
Paulo Dybala: “Lionel Messi waa xidiga aan kaga daydo kubada cagta, waxaana wax kaga baranayaa si joogta ah”
RASMI: Éric Abidal oo loo magacaabay Agaasimaha ciyaaraha cusub ee kooxda Barcelona